PSJTV | साहित्यिक ध्रुवीकरण जरुरी छ
बुधबार, २४ असोज २०७५ बच्चु हिमांशु
'जब नेता शान्तिको कुरा गर्छ
सर्वसाधारणले यो बुझ्दछकि
यूद्ध धेरै नजिक छ'
बर्तोल्त ब्रेख्तका यी हरफहरु पढ्दै उनले कविता लेख्न सिके। सिके त के भनौं, कविताको अर्थ बुझे। कविताको अर्थ बुझ्नुपनि उनका लागि जीवन बुझ्नुसरह थियो। आफू हुनुको अर्थलाई बुझ्नुसरह थियो। जति उनले आफूलाई बुझ्दै गए, उति उनलाई लाग्दै गयो, उनको जीवनपनि एउटा सुन्दर कविता हो। तर सुन्दरतालाई उनले केवल मानिसका भौतिक सुखानुभूतिसंग जोडेर हेरेनन्। उनलाई आफ्ना बाले खनिरहेको खेतको डोब जीवनको एउटा सङ्गीतजस्तो लाग्न थाल्यो। आफ्नी आमाले लिपिरहेको थोत्रो घरको सिकुवा उनको जीवनको एकमात्र पाठशालाजस्तो लाग्न थाल्यो। पाखामा रातै फुलेका लालीगुराँस अवश्यंभावी क्रान्तिका सूचकजस्ता लाग्न थाले। घरछेउमा अविरल बग्ने सानो खोल्सीपनि उनलाई गाउँलेहरुको मूल्यवान् पसिनाको भेलजस्तो लाग्न थाल्यो। उनले लिने हावामा चेतनाका अवयवहरु उड्दैउड्दै उनीभित्र समाहित भइरहेको अनुभूत गर्थे। उनले घाँस काट्ने हँसियालाई आफू वरिपरी विद्यमान् विभेदविरुद्ध उठ्नसक्ने सबैभन्दा ठूलो हतियार देखे। उनले आफ्ना आसपासका सबै तत्त्वहरुमा इतिहासको एउटा युगान्तकारी परिवर्तनको आवश्यकता देख्न थाले। तब उनीभित्र एउटा कविमनले बास माग्यो। तर उनको मश्तिष्कले फूलको स्निग्ध सौन्दर्यको कुरामात्रै सोचेन। उनका आँखाहरुले कुनै सुन्दर स्त्रीका मृगनयनहरुमात्रै हेरेनन्। उनको मुटुमा केवल गौरीशंकरको मन्त्रमुग्ध मुस्कानमात्रै आएर बसेन। न त उनको मनमा सिर्फ प्रेमिल स्मृतिहरुले डेरा मागे। उनी त आफ्नो कविमनले समाजका असह्य उतारचढावहरु देख्थे। उनी त आफ्ना चेतनशील आँखाहरुले विभेदको पराकाष्ठा देख्थे। उनी आफू यो समाजमा हुनुको औचित्यलाई आफ्नो यही दृष्टीकोणले कवितामार्फत सिद्ध गर्न चाहन्थे। उनी आजसम्मपनि अरुण नदिको बहावजस्तै अनवरत रुपमा समाजको कुरुप यथार्थलाई कविताभित्र कोरिरहेका छन्।
समाजमा उनीमात्रै थिएनन्, जोभित्र समाजको सौन्दर्यप्रतिको यस्तो अलग धारणा थियो। उनी त हजारौंभित्रका एक थिए, जसको मनमा आँधीसरी प्रगतीशील विचारका वेगहरु चलायमान हुन्थे। तर सत्ताको क्रुर चरित्रका विरुद्ध यी सबैले आवाज उठाउनसक्ने हिम्मत कहाँ! तर उनले आफूजस्तै केही निडर हस्ताक्षरहरुपनि भेटे। साहित्यलाई माध्यम बनाएर समाजमा भएका विसंगतीहरुको शल्यक्रिया गर्न सकिने निश्कर्ष 'उन्मुक्त पुस्ता'ले निकाल्यो। उनीपनि यो पुस्ताका एक शाहसी पहरेदार बने। सत्ताको निर्दयी बुटले कुल्चिएर थिलथिलो भएका भूईंमान्छेहरुका दमित आवाजहरु 'पोस्टर कविता' बनेर शहरका गल्लीगल्लीमा गुञ्जिन थाले। तिनमा यो देशको एक गरीब किसानको कथा थियो। यो देशकी एक प्रताडित महिलाको चित्कार थियो। नारी र पुरुष, यी दुई जातबाटपनि अर्को जात बनाइएर सदियौंदेखि जातजातबीच पिल्सिएका दलितहरुको अनन्य रोदन थियो। तर उनीहरुले कहिल्यै मानिसका पीडाहरुको व्यापारीकरण गरेनन्। तिनलाई त उनीहरुले आन्दोलनमा उठाइने हातका मुठ्ठीहरु बनाए। 'आफर' कविताकृति यही अभियानको एउटा एेतिहासिक उपलब्धि थियो। जसभित्र नेपाली समाजमा सधैं सबैभन्दा उच्चसम्मानमा रहनुपर्ने तर युगौंदेखि छुवाछुत गरिएका दलितहरुमा समर्पित कविताहरुमध्ये एउटा उनकोपनि छ। यसरी साहित्यिक कृतिको उनको व्यक्तिगत इतिहासमा सर्वप्रथम संयुक्त कविताकृतिले स्थान लियो। उनी मातृभाषामा पोख्त भएकाले केही समयअघिमात्रै 'काकलिङ' कविताकृति सबैमाझ लिएर आए। खास अर्थ, एउटा पुरातन तामाङबस्तीको प्रवेशद्वार हुने 'काकलिङ' शब्दबाट राखिएको तामाङ भाषाको कृति आफ्नो जातिसमुदायप्रतिको उनको अगाध प्रेमको प्रतिक थियो।
महान् क्रान्तिकारी नेता चे ग्वेभारा जन्मिएकै दिन उनीसंग भृकुटीमण्डपको एउटा चियापसलमा भेट भयो। टाउकोमा क्रान्तिको प्रतिकजस्तो रातो क्याप कहिल्यै नछोड्ने यी प्रगतीशील कवि कुनै यूद्धमोर्चामा डटेर लडिरहेका र आफ्नो समाजको मुक्तिप्रति प्रतिबद्ध एक निडर जनसेनाजस्ता देखिन्छन्। उनीसंग केही समय साहित्यिक विमर्श गर्ने उद्देश्यका साथ भेटिएका हामी निकै दिनदेखि नजिक हुन चाहेरपनि सकिरहेका थिएनौं। चेकै जन्मदिनमा हाम्रो भेट हुनु केवल एउटा संयोगमात्र थिएन, यसको विशेष अर्थपनि थियो। विशेष अर्थ यो मानेमा कि, नेपाली साहित्यमा सिमान्तकृतहरुको प्रतिरोधी चेतना बनेर निरन्तर सत्ताको रवैयाविरुद्ध धावा बोलिरहेका एक पात्रलाई भेट्ने अवसर थियो त्यो। ती प्रतिनिधीपात्र अरु कोही नभएर प्रगतीशील साहित्यका आधारस्तम्भ, कवि मुक्तान थेवा थिए।
नेपाली समाजमा सदियौंदेखि अनेकौं किसिमका विभेदहरु विद्यमान् छन्। यो देशका बहुसङ्ख्यक जनताहरु दशकौंदेखि सत्ताको अपमानजनक लात्ती सहेर बसिरहेको अवस्था छ। यहाँका महिलाहरुका आक्रान्त आवाजहरु निर्दयताका साथ थुनिएका छन्। मान्छेहरुको रगत त सबैको रातो हुन्छ। तर त्यो रातो रगतभित्रपनि सामाजिक विभाजनका अनेक कुरुप यथार्थहरु छन्। समाजमा रहेको विविधताको अनुपम सौन्दर्यमाथि समाजका हुनेखाने भनिएकाहरुले अपाच्य वर्गीकरण गरेका छन्। आफ्नो रुप परिवर्तन गर्दै आजसम्मपनि समाजमा यो चरित्रको झुण्ड हावी छ। यस्तो कुकृत्यका विरुद्ध निरन्तर खबरदारीहरु भइरहेका छन्। सबै क्षेत्रबाट विरोधका आवाजहरुपनि उठिरहेकै छन्। एउटा कलमको स्थिति शक्तिलाई परिवर्तनको द्योतकका रुपमा स्थापित गर्ने उद्देश्यका साथ केही साहित्यकारहरुले मान्छेका पीडाहरुलाई प्रधानताका साथ लेखिरहेका छन्। तिनको एकमात्र उद्देश्य भनेको सधैं सत्ताको विपक्षमा रहेर आमनागरिकका कथाव्यथाहरुलाई सङ्गठित र सृजनशील अभिव्यक्तिसहित सत्ताविरुद्ध प्रहार गर्नु हो। यस्तो धारको साहित्य, प्रगतीशील साहित्यका रुपमा आज नेपाली साहित्यमा परिचित छ। त्यही परिचित धारको एक अविचलित हस्ताक्षर हो, कवि मुक्तान थेवा।
"प्रगतीशील धारको साहित्यकारका रुपमा चिनिनु मेरो वर्गप्रतिको मेरो इमान्दारिता हो।" यसरी आफ्नो बडो रवाफिलो परिचय दिन्छन् कवि थेवा।
समाजका उत्पिडितहरुको आवाज बनेर लेख्नु उनलाई आफूले साहित्य लेख्नुको सार्थकता हो भन्ने लाग्छ। उनी आफू प्रगतीशील धारको साहित्यकार भनेर चिनिनुलाई गर्वको विषय ठान्छन्।
तर कतिन्जेल प्रगतीशील भइराख्न सकिन्छ भन्ने चूनौतीपनि आफूलाई रहेको स्वीकारोक्ति दिन्छन् थेवा, "प्रगतीशील साहित्यकार भनेर चिनिनु मेरो कमजोरी होइन। यो त मेरो वर्गप्रतिको मेरो समर्पण हो। तर कतिन्जेल प्रगतीशील भएर रहन सक्छु, मेरो डर यतातिर छ।"
नेपाली साहित्यमा हरबखत चर्चामा आइरहने 'सिन्डिकेट' शब्दको आफ्नै परिभाषा छ कवि थेवाको, "भूईंमान्छेको कथा लेख्नेसंग सिन्डिकेट लगाउनसक्ने सामर्थ्य हुँदैन। अहिले भनिएको सिन्डिकेट मूलधारका भनिएकाहरुद्वारा लगाइएको हो, जसको सत्ता र शक्तिसंग राम्रो पहुँच छ।"
कवि थेवा नेपाली साहित्यमा भइरहेको ध्रुवीकरणलाई अन्यथा मान्दैनन्। यो त जरुरी छ भन्ने उनको निचोड छ। देशभित्र विचलनका यावत घटनापरिघटनाहरु घटिरहेका बेला सिर्फ मायाप्रेम र रतिरागका कुराहरु लेख्नु आफ्नै लेखनमाथि प्रश्नचिन्ह खडा गर्नुसरह ठान्छन् उनी। यसकारणपनि ध्रुवीकरण नितान्त आवश्यक ठान्छन् थेवा।
नेपाली साहित्यमा रहेका समस्याहरुमाथि उनको अलग्गै चिन्तन छ, 'गैरप्रगतीशीलहरुले लेख्ने साहित्यभित्रको समस्या म जान्दिनँ। यो म बुझ्नपनि चाहन्नँ, तिनका समस्या के छन्। मेरालागि समस्या भनेको हामीबीचको एकता नहुनु हो। आज प्रगतीशील धारका हस्ताक्षरहरु विभिन्न खेमामा विभाजित भएका छन्। यो हो हाम्रो समस्या।"
आफ्नै वर्गभित्रका साहित्यिक आवाजहरु सङ्गठित भएर बुलन्द हुन नसक्नुलाई उनी यतिबेलाको सबैभन्दा ठूलो समस्याका रुपमा हेर्छन्।
राज्यले आमजनताका आवाजहरुलाई नियोजित रुपमा दमन गरिरहेको उनको ठहर छ, "राज्यले प्रगतीशील साहित्यलाई निषेध गरिरहेको छ। विभिन्न कोणबाट राज्यले हामीमाथि योजनाबद्ध प्रहार गरिरहेको छ।"
उनको यस्तो अभिव्यक्तिमा संसय राख्नुपर्ने ठाउँपनि छैन। पछिल्ला घटनाक्रमहरु र इतिहासका विभिन्न कालखण्डहरुले यो तथ्य स्वत: प्रमाणित गरिदिएकै छन्।
कला या विचार, के प्रधान भन्ने मूल प्रश्नले नेपाली साहित्यबाट यतिबेला जवाफ मागिरहेको छ।
यसमा कवि थेवाको आफ्नै मत छ, "समाजमा अन्याय, उत्पीडन र विभेद छ। तिनलाई बिर्सेर तथाकथित सौन्दर्य, प्रणय र यौनका कुरा गर्नु आफ्नो समाजप्रतिको बेइमानी हो।"
"स्रष्टा भनेको द्रष्टापनि हो। एक स्रष्टा राम्रो पथप्रदर्शकपनि हो।" तर समाजमा विद्यमान् रोग, भोक र शोक बिर्सेर केवल श्वैरकल्पनाका कुरा लेख्नुले लेखकीय महत्व चरितार्थ नहुने उनको निर्क्यौल छ।
हजारौंको बलिदानीबाट प्राप्त उपलब्धीहरु संस्थागत हुन नसकिरहेको अवस्थामा लेखकले सिर्फ सौन्दर्यका कुरा गरेर बस्न नहुने उनको तर्क छ। प्रगतीशील साहित्यमाथि कलालाई उपेक्षा गरेको आरोप लागिरहेकोप्रति उनको कडा प्रतिक्रिया छ। पारिजात, कृष्णसेन ईच्छुक, रामेश, रायन, जीवन शर्मा, जेवी टुहुरेजस्ता सर्जकहरुले विचारप्रधान साहित्यलाई स्थापित गरेको तर तिनले केवल नारामात्रै नबोलेको दृष्टान्त दिन्छन् उनी।
कवि मुक्तान थेवा आफ्नो लेखनको उद्देश्यका बारेमा 'क्रिष्टल क्लियर' धारणा राख्छन्, "म चर्चा र व्यक्तिगत सन्तुष्टीका लागि साहित्य लेख्दिनँ। कसैले बाटोमा भेटिंदा 'कविज्यू' भनेर सम्बोधन गर्दै नमस्कार गरोस् भन्ने मेरो चाहना होइन।"
उनी आफ्नो समुदायभित्र दबाइएका आवाजहरुलाई निरङ्कुश सत्ताविरुद्ध प्रहार गर्ने सशक्त हतियार बनाउन चाहन्छन्। यसैका लागि आफूले लेखिरहेको उनको 'कन्फेसन' छ।
नेपालमा लेखेर कमाउन गाह्रो छ। प्रगतीशील साहित्य लेख्दैगर्दा यो गाह्रो शब्द परिवर्तन भएर 'अत्यन्तै गाह्रो' बन्छ। तर उनी बडो सहज भावभङ्गीमा आफ्नो मत राख्छन्, "प्रगतीशील साहित्य लेख्नेहरुले मुनाफाका लागि लेख्दैनन्। आफ्नो आन्दोलनलाई स्थापित गर्नुनै उनीहरुको सबैभन्दा ठूलो कमाई हो।"
तर राज्यको रवैया सही नभएकै कारण आज प्रगतीशील साहित्य लेखेर जीविकोपार्जन गर्न सकिने अवस्था नरहेको उनको तर्क छ।
कवि थेवाका लागि लेखकीय सफलताको सूत्रले खासै अर्थ राख्दैन। उनी यस्ता कुरालाई गैरप्रगतीशीलहरुको सबैभन्दा ठूलो मन्त्रका रुपमा लिन्छन्, "मुक्तान थेवाको व्यक्तिगत सफलताले यहाँ कुनै अर्थ राख्दैन। मैले प्रतिनिधीत्व गरिरहेको वर्गको हातमा राज्यसत्ता पर्योकि परेन भन्ने कुराले मेरो वास्तविक सफलता निर्धारण गर्छ।"
प्रगतीशील साहित्य लेख्नु एउटा ठूलो चुनौती ठान्छन् कवि थेवा। समग्र राज्य र यसका संयन्त्रनै संगठित रुपमा आफूहरुविरुद्ध लागिपर्ने गरेको यथार्थपरक उदाहरण पेस गर्छन् उनी। प्रगतीशील कवि भएकै कारण कृष्णसेन ईच्छुकलाई राज्यले हत्या गरेको कारुणिक घटना सम्झिन्छन् उनी।
तर यस्ता यावत चुनौतीहरु हुँदाहुँदैपनि लेख्न छोड्न नहुने कुरामा उनको जोड छ, "हामीलाई जेलनेलजस्ता सारा चीज हुनसक्छन्। तर हामीले सरकारका यी अवश्यंभावी कदमहरुलाई चुनौती दिएर लेखिरहने हो। यसका लागि हामी सधैं तयार हुनुपर्छ।"
नेपाली साहित्यको वर्तमान स्तर विश्वसाहित्यसंग रत्तिभर फरक नरहेको तर्क कवि थेवाको छ।
विश्वसाहित्यको परिप्रेक्ष्यमा नेपाली साहित्य भनेको तथाकथित सौन्दर्यका कुरा हुन नसक्ने उनको भनाई छ, "विश्व साहित्यमा जुन स्तरमा मानिसका कथाहरु लेखिएका छन्, तीभन्दा हाम्रा कथाहरु एक ईन्चपनि निम्नस्तरका छैनन्। शिल्पभन्दापनि मुद्दा प्रधान कुरा हो। यस हिसाबले हाम्रो साहित्यको स्तर सबैसंग समान छ। तर हामीले विश्वलाई चिनाइरहेको नेपाली साहित्य कुनचाहिं हो भन्ने मूल प्रश्न हो।"
मार्क्स, ब्रेख्त, लु सुन र पारिजातले लेखेको साहित्यमा कुनै स्तरगत भिन्नता देख्दैनन् उनी।
विश्वबजारले नेपाली साहित्यलाई हेर्ने दृष्टीकोणले ठूलो प्रभाव पार्ने उनको भनाई छ, "उनीहरु बिकाउ चीज हेर्छन्। पुँजीवादी बजारमा छिटो बिक्ने साहित्य उनीहरुका लागि उत्कृष्ट हुन्छ। पारिजातको 'अनिंदो पहाड'लाई छोडेर 'शिरिषको फूल'चाहिं युनिभर्सिटीमा पढाइनु उनीहरुको साहित्यप्रतिको बदनियत हो।"
कवि थेवालाई मार्क्सवादी साहित्यको गहिरो अध्ययन गर्न मन लाग्छ। विश्वसाहित्यमा प्रगतीशील धारमा लेखिएका हरेकजसो कृतिहरु उनी खोजीखोजी पढ्छन्। पछिल्लो समयमा पहिचानको मुद्दामा आधारित भएर लेखिएको साहित्य उनले विशेष चासोका साथ अध्ययन गरिरहेका छन्। मार्क्स, गोर्की, मार्खेज, ब्रेख्त, लु सुन, पारिजात र कृष्णसेन ईच्छुक उनका मनपर्ने स्रष्टाहरु हुन्।
यतिबेला कवि मुक्तान थेवा 'खस नेपाली' भाषामा लेखिएको आफ्नो पहिलो एकल कविताकृति 'अखण्ड आलाप' लोकार्पणको अन्तिम तयारीमा छन्।
आफ्नो नयाँ कवितासङ्ग्रह 'अखण्ड आलाप'को रचनागर्भबारे उनी स्पष्टीकरण दिन्छन्, "उत्पीडित जाति, समुदाय, वर्ग र क्षेत्रको मुद्दामा आधारित रहेर लेखिएका कविताहरुको सङ्ग्रह हो यो। यो कविताकृति विशुद्ध रुपमा प्रगतीशील विचारमा आधारित रहेर लेखिएको छ। यसभित्र मैले सामाजिक यथार्थचित्रण गर्ने प्रयास गरेको छु। र यो कृति आमजनताको मुद्दा हो।"
उनले यो कृतिबाट कुनैपनि किसिमको चमत्कारिक परिणामको अपेक्षा गरेका छैनन्। आफूले कवितामा प्रस्तुत गरेको लक्षित समुदायले यो कृतिलाई अपनत्व महसूस गरुन् भन्ने उनको उत्कट चाहना छ। हामीले प्राप्त गरेका राजनीतिक उपलब्धी भनिएका मुद्दाहरु यतिबेला ओझेलमा परेका छन्, तिनलाई जनतासमक्ष पुन:स्थापित गराउने सङ्कल्प लिएका छन् उनले।
उनी फेरिपनि स्पष्ट पार्छन्, "यो सङ्ग्रह केवल चर्चा र 'कवि' भनिनकालागि आएको होइन। मेरो समुदायप्रति इमानदार भएर ल्याइएको कृति हो यो।"
कवि मुक्तान थेवाको कविताकृति 'अखण्ड आलाप' राजधानीको अनामनगरस्थित मण्डला थियटरमा आज बुधबार दिउँसो सार्वजनिकीकरण हुँदैछ। उनको कृतिमाथि लेखकहरु भूपाल राई, राजेन्द्र महर्जन र निभा शाहले आआफ्नो तर्फबाट समिक्षा प्रस्तुत गर्नेछन्। उनलाई हाम्रो तर्फबाट आफ्नो कृतिको सफलताको शुभकामना त छँदैछ, त्योभन्दा धेरै बधाई त ती आम भूईंमान्छेहरुलाई दिन मन छ, जसले थेवाजस्तो उनीहरुका आवाज बुलन्द गर्नसक्ने सशक्त प्रतिनिधीपात्र पाएका छन्।
बधाई, हामी सबैलाई!
विप्लवका १४९ कार्यकर्ता छुटे, सरकार विप्लवप्रति किन लचक बन्दै छ ?
काठमाडौं : बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआएरएनए) को समेत संलग्नता भेटिएको छ। सरकारी जग्गा विवादास्पद ढंगले व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको थाहा पाउँदा पाउँदै पनि एनआएरएनएका केही पदाधिकारीले जबर्जस्ती खरिद ...
29th Apr 2019 पिएसजे टिभी